भुलेर पनि फेरि तताएर नखानुहोस् यी खानेकुरा, बि ष सरह बन्छ ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/भुलेर पनि फेरि तताएर नखानुहोस् यी खानेकुरा, बि ष सरह बन्छ !
व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएपछि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ ? त्यसो भए, जान्नुहोस्, कुन–कुन खाना फेरि तताएर खान मिल्दैन ।
आलु – आलुलाई दोहोर्याएर तताएमा त्यसमा भएको सबै पोषक तत्व नास भएर जान्छ । यस्तो अवस्थामा तपाई आलु खाएर पेट त भर्नुहुन्छ, तर कुनै पोषक तत्व पाउनुहुन्न । यतिमात्रै होइन यसले तपाईको शरीरलाई पनि असर गर्छ ।चामल(भात) – काँचो चामलमा किटाणु हुन्छन् र पाकेपछि ति सबै मरेर जान्छन् । तर, पाकेको चामल सेलाएपछि फेरि बढ्न थाल्छन् र फेरि तताएपनि मर्दैनन् । त्यसैले, भात पाकेपछि ताजै खानेगर्नुहोस् ।
खुट्टाको कुर्कुच्च खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? ठिक पार्न यी उपाय अपनाउनुहोस्